चुलबुल पाण्डे इस ब्याक !! - हिमाल दैनिक
चुलबुल पाण्डे इस ब्याक !!
१८ चैत्र २०७५, सोमबार १५:००
अप्रिल १ ,२०१९
सोमबार बिहान सलमान खानको ट्वीटरमा एउटा तस्बिरले उनका लाखौ फ्यानलाई उत्साहित गरेको छ। त्यस तस्बिर हेरेपछि जो कोइले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ कि ‘पाण्डेजी इस ब्याक!’। उनको नया फिल्म ‘भारत’को सुटिंग सकेर उनी अहिले दबंग-३ को लागि ब्यस्त देखिनछन् ।
दबंग-३ पहिलो दिनको सुटमा उनी आफ्नो क्लासिक चुलबुल पाण्डे पोजमा देखिए। त्यस्तै उनको त्यो तस्बिरमा दबंग-३ का निर्देशक प्रभु देवा पनि छन्। उनले ट्वीटरमा आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन् ‘डे वान…. #dabang-3’
दबंग-३ का निर्माता सलमान खानका भाई अरबाज़ खान रहेका छन्। दबंग एक र दुईबाट निकै रुचाएका जोडी सलमान र सोनाक्षी सिंह इन्डोरमा सुटिंगमा व्यस्त छन्।
यस अघि सलमानले आइतबार एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा उनी र उनका भाई आरबाज़ आफ्नो जन्मथलो इन्डोर पुगेको खबर दिए। उनका अनुसार उनीहरु दबंग-३ को पहिलो दिनको सुटिंगका लागि मन्डलेश्वर र महेश्वर हुने बताएका थिए। सलमानले त्यस ठाउँ उनका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनका हजुर बुवा पुलिसमा हुदा त्यस ठाउँमा काम गरेका थिए।
सन् २०१०मा अभिनव केशव द्वारा निर्देशित दबंगमा सोनाक्षी र सलमानको जोडीलाई दर्शकले निकै मन पराएका थिए। त्यसपछि सन् २०१२ मा अरबाज़को निर्देशनमा दबंग-२ रिलिज भएको थियो। सात बर्ष पछि फेरी दर्शकले सलमानलाई पुलिस अफिसरको किरदारमा देख्नेछन्।(एजेन्सीको सहयोगबाट)
Prevपछिल्लोग्यास सिलिण्डर पड्किँदा चार घाइते
अघिल्लोसुनसान तीरमा, सडकले परिवर्तनNext